TENY SOA SAKAFO ALAHADY 21 OKTOBRA 2018 – ALAHADY TSOTRA FAHA- 29 | FKMP
TENY SOA SAKAFO ALAHADY 21 OKTOBRA 2018 – ALAHADY TSOTRA FAHA- 29
Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka (Mk. 10, 35-45)
Tamin’izany andro izany, nanatona an’i Jesoa i Jakôba sy i Joany zanak’i Zebede ka nanao hoe: “Ry Mpampianatra ô, tianay mba hataonao aminay izay hangatahinay aminao”. Ary hoy Izy: “Inona no tianareo hataoko aminareo?” Dia hoy ireo: “Aoka ny anankiray aminay mba hipetraka eo ankavananao ary ny anankiray eo ankavianao any amin’ny voninahitrao”. Ary hoy i Jesoa taminy: “Tsy fantatrareo izay angatahinareo; moa mahasotro ny kapoaka izay hosotroiko va ianareo, na mahazaka ny batemy izay hanaovana batemy Ahy?” Hoy ireo taminy hoe: “Zakanay”. Fa hoy kosa i Jesoa: “Raha ny kapoaka hosotroiko, dia hosotroinareo ihany tokoa, ary ny batemy hanaovana batemy Ahy dia hanaovana batemy anareo ihany koa; fa raha ny hipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako kosa, dia tsy Ahy ny hanome izany, fa ho an’izay nanamboarana azy ihany izany”. Nony nandre izany izy folo lahy dia tezitra tamin’i Jakôba sy i Joany; fa nantsoin’i Jesoa izy ireo ka nilazany hoe: “Fantatrareo fa amin’ny fanjakan’izao tontolo izao, dia ny mpifehy no mitsangana ho tompo mandidy, ary ny lehibe no miseho ho mpifehy manam-pahefana. Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany; fa izay te ho lehibe indrindra no aoka ho mpanompo anareo, ary izay te-ho ambony indrindra eo aminareo no aoka ho mpanomponareo rehetra. Fa ny Zanak’olona tsy mba tonga hotompoina, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro”.
Ohatra iray maneho ny fiainam-pinoantsika andavanandro ity lazain’ny Evanjely ity. Te hanatona an’i Kristy isika , te hahazo ny fiainana mandrakizay saingy araka ny foto-pisainan’izao tontolo izao no anarahantsika an’i Jesoa Tompo. Te hanjaka araka ny fiheveran’olombelona ny atao hoe fanjakana toa ireo mpianatra mirahalahy nangataka ny hipetraka eo ankavanana sy ankavian’ny Tompo. Ratsy fijery ny hafa sy mora voasariky ny fialonana toy ireo mpianatra sasany ka miteraka fifandirana sy korontana amin’ny fiainam-piangonana matetika. Soa fa manitsy dia antsika mandrakariva i Jesoa Kristy, mampianatra antsika ny tena fahamarinana. Noho izany, rehefa mivavaka isika dia fantaro tsara izay angatahina sao tonga amintsika ny tenin’ny tompo hoe : « tsy fantatrareo izay angatahanareo. » Aoka hifanasoa sy hifanompo mba hiala ao ampontsika ny fialonana sy ny fitsaratsaram-poana ny hafa satria i Jesoa Tompo arahintsika dia tsy mba tonga hotompoina fa tonga mba hanompo. Izany no mari-pitiavana.
Previous Post: Alakamisy 28B (Lk 10, 1-9) 18/10/2018
Next Post: TENY SOA SAKAFO ALAHADY 28 OKTOBRA 2018 ALAHADY TSOTRA FAHA-30